Glass Firber ulwelwesi Hlunga Igobolondo
Insimbi Engagqwali ezifincizekile ezifana nezimpiko Hlunga Igobolondo
Ukusetshenziswa kokuhlunga ulwelwesi emikhiqizweni yezolimo kanye neyaseceleni
Isikhathi Iposi: Aug-06-2021
Emikhiqizweni yezolimo neyaseceleni, iwayini, uviniga nesosi yesosi kuyabiliswa kusitashi, okusanhlamvu. Ukuhlungwa kwale mikhiqizo inqubo ebalulekile yokukhiqiza, futhi ikhwalithi yokuhlunga ithinta ngqo ikhwalithi yemikhiqizo. Izindlela zokuhlunga zendabuko zifaka n ...Funda kabanzi »
Ukuhlunga okuphelele nokuhlunga okuhlobene
Ekukhetheni izinto zokuhlunga izindlu / isihlungi, akwanele uma kubhekwa isilinganiso sokuhlunga nosayizi wezindlu zokuhlunga, kepha futhi kudingeka ucabangele ukusebenza kwesihlungi. Isilinganiso se-1.Nominal: Esikhathini esedlule, isilinganiso esilinganiselwe besisetshenziselwa ukuchaza ukunemba kokuhlunga kwesihlungi. H ...Funda kabanzi »
Ulwelwesi ukusonga isihlungi se-elementi isingeniso
“Ukuhlunga” kubhekisa ekwehlukaneni kwezinhlayiya ezincane eziqinile noma izinhlayiya ze-aerosol kuketshezi (igesi / uketshezi) koluketshezi. Idivayisi esetshenziselwe ukufeza lokhu kwehlukaniswa iyidivayisi yokuhlunga. Idivayisi yokuhlunga kufanele ifakwe ngento yokuhlunga Kuphela lapho okokuhlunga ku ...Funda kabanzi »
Yini i-microporous membrane folding filter element
Izici eziyinhloko ze-microporous membrane folding filter element yilezi: isilinganiso sokwenqaba okuphezulu, isilinganiso sokugeleza okuphezulu, umehluko ophansi wengcindezi nokuhambisana kwamakhemikhali okubanzi; Inqubo ukukhiqizwa usebenzisa eliyingqayizivele hot ncibilika Welding ukucutshungulwa ubuchwepheshe, ngaphandle iyiphi ingcina, akukho udaba angaphandle relea ...Funda kabanzi »
Isingeniso se-Stainless steel housing isingeniso
Isikhathi Iposi: Apr-06-2021
Izindlu ngokuvamile zenziwe ngensimbi engagqwali, kanti ingaphakathi lisebenzisa ukuqhuma kwe-PP, inxeba lezintambo, isihlungi esigoqiwe, isihlungi se-titanium, isihlungi sekhabhoni esisebenzayo nezinye izinto zokuhlunga ze-tubular njengezinto zokuhlunga. Izakhi ezihlukile zokuhlunga zikhethwa ngokuya nge- ...Funda kabanzi »
Ungakhiqiza kanjani i-cartridge yesihlungi esincengayo?
1. Hlunga umshini wephepha ukukhiqiza ama-cartridge we-filter. Ukubeka imidiya yokuhlunga esezingeni eliphakeme enobubanzi obufanele ku-roller, umshini wokuncenga uqala ukwenza amapuleti athile njengokuzama kwecala ukulungisa isivinini sokuncenga nokuphakama kokuncenga. Umklamo opholile ukhuphule ...Funda kabanzi »
Isikhathi Iposi: Feb-16-2021
I-Kinda filtration isungule ilabhorethri enkulu, enganikeza isethi ephelele yokuhlola nokuqinisekisa insizakalo yemithi, ukudla & isiphuzo kanye nemboni yezindlu yokuhlunga, kanye nezixazululo ezinembile zokuhlunga kanye nemibhalo ...Funda kabanzi »